Maalinta: Abriil 12, 2017
22 oo ka socda Shiinaha ilaa Shiinaha ayaa qaadan doona tareen degdeg ah
Malaysia waxay Shiinaha ka heli doontaa tareenka xawaaraha sare ah ee 22: Wasaaradda Gaadiidka ee Malaysia waxay Shiinaha ka heli doontaa tareenka xawaaraha sare ah ee 22. CRRC oo u dhaxaysa Shirkadda Isgaarsiinta Korontada ee Zhuzhou iyo Wasaaradda Gaadiidka Malaysia ayaa shalay xaruntooda ku taal gobolka Hunan ee dalka Shiinaha. [More ...]
Duulimaadyada Diyaaradda ee Samsun-Krasnodar waxay ka soo bilaabatay: Dawladda Hoose ee Magaalada Samsun, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Samsun iyo Shirkadda Diyaaradaha Ruushka ee Rusline ayaa heshiis la galay duullimaadyada u dhexeeya Samsun-Krasnodar. [More ...]
Trabzon Railroad ayaa lagu qorsheeyay qorshaha millatariga ee 50
Wadada tareenka Trabzon waxaa la geliyay qorshaha kun ee 50 kun ee magaalada: Trabzon Metropolitan Dowladaha Hoose ee April April shirarkii baarlamaanka maanta, Madaxweynaha Orhan Fevzi Gumrukcuoglu, waxaa lagu qabtay Madaxtooyada. Ajandaha Golaha, Guddiga Dib-u-dhiska, “oo daboolaya xuduudaha Gobolka Trabzon [More ...]
Duqa magaalada Altepe ayaa ku dhawaaqay hadafkiisa, nidaamka tareenka oo dhan wuxuu noqon doonaa mid dhulka hoostiisa mara. Doorashada 1989 [More ...]
Xubnaha YOLDER waxay ku kulmeen Muş
Xubnaha YOLDER waxay ku kulmeen Muş: Gudoomiyaha YOLDER Özden Polat wuxuu la kulmay xubnahan intii uu ku sugnaa booqashada Muş. Cinwaanka Polat cinwaankiisii ​​ugu horreeyay ee xubin X XXX YOLDER kaasoo dhintay Abriil 1 [More ...]
Karşıyaka Tram ayaa la jabsaday kahor safarka
Karşıyaka Tram ayaa burburay ka hor safarka: Dowlada hoose ee Izmir Karşıyaka dhameystiray dhismaha degmada, maantana waxay bilaabi doontaa safarka iyada oo loo eegayo sharraxaadda hore ee tareenka, taraamka, kalabadh inta uusan bilaaban. İzmir Metro Inc. [More ...]
Samsunda shil baabuur
Shilka taraamka Samsunda: Qof ayaa ku dhaawacmay shilka tareenka ee degmada Samsun Atakum ee Samsun, taraamka ayaa ku dhacay gaadhiga halka qof dumar ahna ay ku dhaawacmeen taraamka. Nidaamka tareenka ee ku yaal Mimar Sinan stop [More ...]
Karşıyaka tram ayaa dhacay markii ugu horeysay
Karşıyaka tram ayaa dhacay markii ugu horreysay: 63 ee İZMİR ayaa dib uga furmay magaalada sanado kadib Karşıyaka Taraamka ayaa burburay markii ugu horeysay. Tareenka wuxuu ku dhacay gaari la sheegay inuu ka gudbey nalka casaanka. dhacdo [More ...]
Gobalka Konya ayaa ka digay codsiga YHT
Digniinta tuurista ee khadadka Konya Governorship YHT: Konya Governorate, Agaasinka guud ee TCDD ee qadka tareenka xawaaraha sare wuxuu sameyn doonaa digniin ku saabsan buufinta. Xafiiska gudoomiyaha ayaa shaaciyey aagga la daadiyay. Agaasinka guud ee TCDD [More ...]
RayHaber 12.04.2017 Warbixinta Shirka
Shirkadda Marinada Diesel Engine Oil waxaa la gadan doonaa Rugta iyo Rakaabka gudaha Iibsashada (TUDEMSAS) Dhaqdhaqaaqa Wax Bixiya Tirada Iskaa wax-gadashada Shaqada Qalabka iyo Nadiifinta Bogagga DE22000-33000 nooca tareenada (TULOMSAS)
TCDD oo ku saabsan dukaanka tareenka lagu buufiyo
Xereen line tareenka ka soo Digniin Tareenka ee: Gobolka Turkey Tareennada (TCDD) 2. Agaasime waaxeedka Adeegga Dayactirka Waddada Tareenka oo qoraal ah, Ankara, Eskisehir, Konya, Nigde, Kayseri, Zonguldak, Karabuk, Kirikkale, Cankiri, Bilecik [More ...]
Istanbul Autoshow 2017 Bak U fiirso si mustaqbalka "
Istanbul Autoshow 2017 Bak waxay u egtahay mustaqbalka ": 21-30 Istanbul Autoshow 2017, oo lagu qaban doono TÜYAP Fair iyo Xarunta Golaha inta u dhaxaysa Abriil 2017, waxaa lagu qaban doonaa 20 April 2017 iyada oo halku dhigeedu yahay" Fiiri Qulqul mustaqbalka ". [More ...]
Kaydinta Agabyada loo Isticmaalo Laydhka Waddooyinka Ankara MACLUUMAAD GUUD EE DIIWAANKA RAIL SYSTEMS Qaybta Howlgalka Mekara M1, M2, M3 Khadadka loo Isticmaalo 15 Pen Qalabka Sahaynta Iibsiga 4734 [More ...]